Manondrana lahatsoratra ho PDF avy amin'ireo mpamoaka lahatsoratra Mac mahazatra | Avy amin'ny mac aho
Manondrana lahatsoratra ho PDF avy amin'ny mpanova lahatsoratra Mac mahazatra
Javier Porcar | | Mac App Store, OS X El Capitan, Tutorials
Raha misy endrika manerantany rehefa mamorona sy mandefa antontan-taratasy, ary miaraka amin'izay dia eken'ny rafitra miasa rehetra, ity endrika ity dia PDF. Izy io dia manana toetra marobe koa izay mahatonga azy tsy ho hay tohaina. Voalohany indrindra noho ny estetika tsotra sy kanto, ary koa ny lanjan'ny fihenan'ny rakitra noforonina. Etsy ankilany, mamela ny handefa azy io amin'ny endrika saika mihidy izay saika tsy mamela fanovana.
Ireo fiderana ireo dia nahatratra ireo tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra fanta-daza, izay nampiditra asa isan-karazany hanondranana ny asa vita amin'ny endrika PDF amin'ny fomba mora. Azavainay hoe iza izy ireo:
Alefaso amin'ny PDF avy amin'ny pejy:
Nahavita ny asa tamin'ny Pejy izahay.
Manery izahay Archive.
Mijoro isika Manondrana
La safidy voalohany izay miseho amintsika dia PDF, tsindrio izany.
Ny dingana manaraka dia ny mifidy kalitao ary zahao raha mila izany izahay arovy ny antontan-taratasy miaraka amin'ny teny miafina.
Farany, manontany antsika izy hoe aiza no fampirimana hanondranana azy.
Alefaso amin'ny PDF avy amin'ny Word:
Vita amin'ny Word ny asa.
Safidintsika ny safidy Tehirizo toy
Andao handeha amin'ny safidy endrika ary tsindrio eo ankavanana sokafy ny dropdown.
Misafidy izahay PDF.
Farany, mifidy izay hitahiry ny antontan-taratasy izahay ary hitahiry.
Alefaso amin'ny PDF avy amin'ny TextEdit:
Miasa amin'ny ekipa iray ianao tsy misy pejy, isa na amin'ny lafiny iray hafa, manana ny fisie ianao ary te hanondrana azy fotsiny fa tsy mila manova na mijery azy amin'ny voalohany.
Tsindrio ny rakitra miaraka amin'ny bokotra havanana.
Mijoro ambony isika Manokatra miaraka amin'ny…
Misafidy izahay TextEdit
Manery izahay Manondrana ho PDF ...
Amin'ny ankapobeny, fampiharana Mac maro no manana ny safidy Manondrana ho PDF ... izay mamela antsika hanondrana ny asantsika amin'ity endrika ity. Safidy iray hafa tena mitombina ny fampiasana pirinty ny antontan-taratasy PDF avy amin'ny fampiharana. Amin'ity tranga ity, amin'ny ampahany hisafidiananao ny mpanonta, misy safidy isan-karazany aseho izay ny fototra indrindra dia ny manonta amin'ny endrika PDF izay tsy manao afa-tsy ny fanondranana voalaza etsy ambony, fa mamela ihany koa, rehefa navadika ho PDF, hanondrana azy any amin'ny iBooks, na handefa azy amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny hafatra.
Mampiasa fomba hafa hanondranana amin'ny PDF ve ianao? Lazao aminay iza avy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Manondrana lahatsoratra ho PDF avy amin'ny mpanova lahatsoratra Mac mahazatra
Soso-kevitra: fitantanana kinova antontan-taratasy ao amin'ny macOS Sierra
Misy ny Apple Campus 3 ary misy horonantsary sy sary marobe amin'ilay tetikasa izahay